Ukukhishwa kwe-Glacial akusenzeki kuphela ehlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngesikhathi sasehlobo ukukhishwa kweqhwa kuyinto ejwayelekile ngokuphelele. Amazinga okushisa afudumele abangela ukuba iqhwa licibilike ngokushesha. Kepha ngesikhathi sasebusika ulwandle ezigxotsheni luyabanda futhi, noma okungenani yilokho olwenzile abantu baze baba nomthelela omkhulu kangaka emvelweni.
Iqembu lososayensi baseSpain baqinisekisile ukuthi ukukhishwa kweqhwa kuzo zombili izigxobo kudlulele ngaphandle kwenkathi yehlobo. Eminyakeni eyishumi edlule, amanani wokukhishwa aphezulu abhalwa ezinyangeni zikaJulayi nango-Agasti. Manje isebenza kusuka ngoJuni kuya ku-Okthoba.
Izilinganiso zakamuva zalaba bachwepheshe ngephrojekthi I-GLAKMA (Ama-GLAciares, amaCrioKarts neMvelo) kubonakala kukukhombisa lokho ukuthambekela kungaqhubeka nokwanda ngokuqhubekayo: ngoMeyi odlule amanani abhalisiwe ayejwayelekile kakhulu ekuqaleni kwehlobo. Le mininingwane yokukhishwa kweqhwa eNyakatho Nenkabazwe yenziwa ezinguzungeni zeqhwa eSweden Arctic, Vatnajökull ice cap (Iceland), izinguzunga zeqhwa eSvalbard (eNorway) naseNyakatho yeUral (Russia).
Ngakolunye uhlangothi, eSeningizimu Nenkabazwe, kukalwa izigaxa ezintathu zeqhwa ezise-Antarctica, e-Patagonia yase-Argentina naseCataan Patagonia. Ngakho-ke, bangaba nenethiwekhi yokubuka izinguzunga zeqhwa kuwo womabili ama-hemispheres, okuthi ivumela ukuba kube nokulawula kokuqhathanisa ukukhishwa kwezinguzunga zeqhwa ngokuya ngesimo sezulu. Isimo sezulu esiya sifudumala futhi sifudumele ezingxenyeni eziningi zomhlaba, ukuze kuthi ngenxa yokuncibilika kukhuphuke ulwandle.
Ukuphakama kwamazinga olwandle sekuvele kuyalinganiswa. Ukushisa komhlaba kuyenzeka. Njengoba kubikiwe yi-GLACKMA, Noma ikuphi kokuhlukahluka okubili okuphakathi kungasetshenziswa ukukala ukuvela kokukhuphuka kwamazinga okushisa, okuyizinga lokushisa elizungezile nokukhipha uketshezi lwe-glacial. Okokugcina kungukuguquguquka okuzinzile kakhulu, ngakho-ke amanani asezingeni eliphakeme namanani aphansi ayatholakala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukukhishwa kwe-glacial akusekho ehlobo kuphela